Akụkọ - Okwu Mmalite nke mkpuchi na laminating njirimara nke PUR laminating igwe
Okwu Mmalite na mkpuchi na laminating njirimara nke PUR laminating igwe
1. Mee ka gluu tinye. Ọ bụrụ na ọnụọgụ nke gluu pere mpe ma ọ bụ na-etinyeghị akụkụ nke akụkụ nke ihe nrapado ahụ, ọ ga-esiri ndị isi abụọ ahụ ike n'oge agbakọ. Anyị nwere ike ịhọrọ igwe analox nwere sel miri emi karị, ma ọ bụ mụbaa ụba nke gluu n'elu mkpụrụ site na ịbawanye nrụgide nke roba na-ebelata nrụgide kọntaktị n'etiti agụba dọkịta na ihe nkedo anilox. Maka ụfọdụ ihe nkiri plastik, enwere ike ịme ọgwụgwọ corona tupu mkpuchi iji mee ka ihu na-acha ọkụ, si otú ahụ mee ka ikike nke mkpụrụ ahụ nwee ike ịmịnye nrapado ma na-amụba ụba nke gluu n'elu.
2. Selecthọrọ oke ikpo ọkụ kwesịrị ekwesị nke dị elu ma ọ bụ dị ala ga-emetụta njikọta njikọta nke ihe nkiri mejupụtara. Mgbe ntekwasa mkpụrụ na-akpọnwụ, kpo oku okpomọkụ dị elu ma ọ bụ mgbe elu okpomọkụ nri, n'elu oyi akwa nke nrapado ga-carbonized, si otú ebibi bonding ike nke nrapado. Ọ bụrụ na ọnọdụ ikpo ọkụ dị oke ala, ozi nke onye nrụpụta ga-eme ka nrapado ya gwụchaa, viscosity nrapado adịghị mma, ihe mejupụtara adịghịkwa ike. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ ga-abụ na ị na-emepụta afụ na fim ahụ mejupụtara, nke ga-emebi ngwaahịa ahụ mejupụtara. N'ezie, anyị nwere ike ịhọrọ nrapado dijitalụ ngwa nbipute na ezi elu okpomọkụ na-eguzogide na retort iguzogide imeghari elu okpomọkụ ihicha, dị ka ojiji nke polyurethane nrapado.
3. Mee ka nrụgide mejupụtara n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Nrụgide mejupụtara gabigara ókè ma ọ bụ nrụgide na-enweghị isi na nsọtụ abụọ nke igwe mejupụtara ahụ ga-eme ka wrinkles dị n'elu ihe nkiri ahụ mejupụtara, a ga-enwekwa tunnels efu na wrinkles mgbe mejupụtara, nke ga-emetụta njikọta njikọta nke ngwaahịa a rụchara. N'ụzọ kwesịrị ekwesị ịbawanye nrụgide ngwongwo bara uru iji melite ike njikọta nke onyinye ahụ.
Tụkwasị na nke a, iji melite mmetụta njikọta nke ihe nkiri mejupụtara na ogo nkwakọ mmiri ara ehi, ọ dị mkpa iji zere ihe ndị si mba ọzọ, uzuzu na irighiri ihe ndị ọzọ site na ịgbaso nrapado ma ọ bụ elu nke ihe mejupụtara. Okwu mmechi Mgbe ị na-arụ ọrụ, jiri nlezianya leba anya na nsogbu na ọdịda dị iche iche na usoro mmepụta, ma jiri usoro ndị a dị n'elu wepu ọdịda ahụ n'ụzọ ezi uche dị na ya. Mgbe enwere ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ ọdịda, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume iji otu usoro. N'oge a, akụrụngwa akụrụngwa kwesịrị izere, na-elekwasị anya na idozi nsogbu ndị bụ isi, wee jiri ụzọ ndị ọzọ dozie obere nsogbu n'otu n'otu.
Hot gbazee gluu Ngwa, Hot gbazee mama mama Laminating Machine Na Ce Asambodo, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe,